ILoft eNtofontofo, iBartinney Wine Estate - I-Airbnb
ILoft eNtofontofo, iBartinney Wine Estate
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguBartinney
Indawo efanelekileyo yokuhamba, impelaveki yothando, ihoneymoon, okanye kubakhenkethi be-wineland eyedwa. Iloft esanda kulungiswa izonwabele iimpawu zendlu yasefama enesitayile, enemiqadi eveziweyo. Imisebenzi yobugcisa ekhethwe ngononophelo kunye nefanitshala eyodwa, izisa ukonakala. Indawo yokubuyela umva isetiwe kwindawo yewayini yaseBartinney, apho unokuhambahamba ediliyeni, wonwabele iimbono zentaba ezingalinganiyo.
Yonwabela amashiti omqhaphu obutofotofo kunye nebhedi etofotofo elingana nokumkani. Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo, elineshawa yokuhamba-ngena kunye nebhafu. Kukho ikhitshi eligcweleyo ukuze kube lula kuwe, kunye negumbi lokuhlala elitofotofo-ikhaya elikude nekhaya, ongasokuze ufune ukulishiya.
Misela kwimbali, indawo yewayini yosapho le ndlu idala i-nostalgia, indawo entle ongasokuze ufune ukuyishiya-kodwa phuma uye kuphonononga kukho okuninzi ongakubona!
Nceda uqaphele ukuba njenge-WWF Conservation Partner zonke ii-Bartinney Private Cellar cottages azinazo izifudumezi ezisembindini kodwa izifudumezi kunye neefeni ziyafumaneka xa ziceliwe.
4.84 · Izimvo eziyi-172
Le ndlwana ibekwe kwimbali yelifa lewayini esetwe kwiHelshoogte Pass eStellenbosch. Iindawo zokutyela ezahlukeneyo umgama nje wokulahla ilitye. Jonga ukutya okumnandi kunye nokungcamla iwayini kwiindawo ezikufutshane kunye neendawo zokutyela eStellenbosch naseFranschhoek.
IBartinney Estate Tasting Shed ivulwa ngoMvulo-ngoLwesine, 12-5pm, ngoMgqibelo 12-3pm nangoLwesihlanu 12-8pm. Yindawo ethandwayo yeziselo ze-sundowner kunye ne-nibbles kwi-terrace emangalisayo, ngolwesiHlanu ngokuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Bartinney
Ndiyafumaneka kwaye ndiza kunceda nakuphi na ukubhukisha indawo yokutyela, izikhokelo kwiindawo ezilungileyo ezikufutshane.
Ukuba ufuna incoko, ndonwabile ukuncokola ngeglasi yewayini.